Ny Wiki Ny Lova Tsara Indrindra? & Ndash; Ny valin'ny Semalt
Ny Wiki Ny Lova Tsara Indrindra? - Ny valin'ny Semalt
Wikipedia na Wiki dia rakipahalalana an-tserasera malaza, izay misy lahatsoratra 36 tapitrisa amin'ny fiteny 250 samihafa. Amin'izao fotoana izao, lasa loharanom-baovao lehibe sy azo antoka indrindra amin'ny aterineto. Ivan Konovalov, Semalt Mpitantana Success Successor, dia miteny fa ny Wikipedia Anglisy irery dia manana lahatsoratra dimy tapitrisa ary ny tranonkala fahenina indrindra no manerana izao tontolo izao. Talohan'ny namoronana an'i Wikipedia, ny loharanom-pahalalana lehibe indrindra dia ny Rakipahalalana Yongle, izay voalaza fa misy lisitra sora-tanana 22 935. Raha nanangana ny vohikala tamin'ny taona 2001 i Jimmy Wales, dia azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny aterineto ny dikan-teny original tao amin'ny Wikipedia. Androany, maherin'ny antsasany tapitrisa ny olona mitsidika ny Wikipedia amin'ny pejy isam-bolana. Maherin'ny 80.000 ireo mpilatsaka an-tsitrapo manitsy ny pejy tsy tapaka, ary olona maro no tsy mahalala ny aterineto tsy misy Wikipedia izay mifandray amin'ny vohikala hafa sy bilaogy maro.
miankina amin'ny Wikipedia ny mpampianatra, ny mpikaroka, ny mpanao gazety, ny mpianatra ary ny mpitsabo dia satria marina ny fampahalalana napetraka ao amin'ity tranonkala ity. Afaka mikaroka ny lohahevitra rehetra ao amin'ity rakipahalalana ity isika, ary ireo manam-pahaizana dia nampiasa ny angon-drakitra mba hampahafantarana ny zavatra avy amin'ny sarimihetsika blockbuster amin'ny tahan'ny fifanakalozana..Amin'ny vanim-potoana, ireo mpanoratra sy mpanoratra maro samihafa dia nanatona sy nanavao ny pejin'ny Wikipedia amin'ny fiteny maro. Ny mpiasam-panjakana, mpanao politika, mpilalao, ary karazan'olona rehetra dia mampiasa izany ho loharanom-baovao amin'ny aterineto. Na dia ny lohan'ny IBM teo aloha aza izay nahavita fanovana mihoatra ny 47.000 tamin'ireo teny hoe 'tafiditra' dia miantso an'i Wikipedia amin'ny tranokalam-pifaneraserana indrindra.
Tsy toy ny Google, Facebook ary Apple, Wikipedia dia tsy tombony amin'ny aterineto mahasoa. Ohatra, ny Apple Inc. dia nanoratra ny tombontsoa tsara indrindra sy lehibe indrindra isan-taona ao amin'ny tantaran'ny orinasa ary nahazo ny tsy fivadihan'ny mpanjifa manerantany noho ny serivisiny sy ny vokatra azony. Etsy ankilany, Wikipedia dia ny tranonkala tsy misy lohateny sy sparse foana miaraka amin'ny lahatsoratra maro navoaka isan'andro. Ity rakipahalalana an-tsitrapo an-tserasera ity dia miasa ho toy ny fikambanana tsy mitady tombontsoa eto amin'izao tontolo izao, izay misy noho ny fanomezana avy amin'ny fiarahamonina manerantany. Wikipedia dia nametraka firaketana vaovao foana ary nampiditra hevitra vaovao momba ny dokam-barotra amin'ny alàlan'ny pejy rindrambaiko sy rohy.
Na dia tsy mitady tombom-barotra aza ny mpamorona ny Wikipedia, dia nanimba ny endriky ny modely ara-barotra sy ny media sosialy nandritra ny volana vitsy lasa izay, hatramin'ny fanabeazana ny sekoly hatramin'ny famoahana lahatsoratra. Ny Wikipedia dia matetika voampanga ho mandringa ny modely ara-toekarena, ary meloka amin'ny fanesorana ireo angon-drakitra efa napetraka ary manome toerana ho fampahalalana vaovao.
Zava-dehibe amin'ny Wikipedia ny mifantoka amin'ny marina ary tokony hijanona ho manan-danja amin'ny sokajin-taona rehetra. Azo antoka fa nanova ny fomba fandinihantsika lahatsoratra amin'ny aterineto i Wikipedia, saingy mbola misy hadisoana maro. Ny fampifanarahana amin'ny teknolojian'ny finday dia tokony ho laharam-pahamehana satria olona maro no mampiasa fitaovana finday mba hiditra amin'ny aterineto. Raha te hahatratra ny tanjona tiany i Wikipedia, dia tokony ho azon'ny rehetra ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra sy amin'ny fiteny rehetra izy io. Tao anatin'ny dimy ambinifolo taona, Wikipedia no lasa fiaraha-miasa tsara indrindra sy lehibe indrindra amin'ny maha-olombelona Source .